Buy High Power Car Power Bank and Air Compressor (77,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
High Power Car Power Bank and Air Compressor
အသုံးဝင်ပုံ] ၁။ ကား ဘက်ထရီ ဝပ်ပါက အလွယ်တကူ ထောက်နိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒီဇယ်ကားများရဲ. Battery ကိုလည်း ထောက်နိုးနိုင်အောင် အားကောင်းပါတယ်။
၃။ Power Bank က ကွန်ပျူတာလည်း အားသွင်းနိုင်အောင် ခေါင်းလေးတွေ ပါပါတယ်။
၄။ ဖုန်းကိုလည်း အားသွင်းနိုင်ပါမယ်။ Power အား ငါးသောင်းကျော်ပါလို. ပုံမှန် ဖုန်းတစ်လုံးကို အားအပြည့် အကြိမ်၁၇ ကြိမ်အထိ
၅။ ကားဘီးကိုလည်း လေထိုးနိုင်ပါမယ်။ လေထိုးဖို. လေထိုးစက်လေးလည်း လက်ဆောင် ပါပါတယ်။
၆။ တစ်ကြိမ်အားသွင်းရင် အကြိမ် ၂၀ အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါမယ်။
အပို ကားလေထိုးစက်တစ်ခု ထပ်ဝယ်ဖို. မလိုပါ။
ကွန်ပျူတာလည်း အားသွင်းလို. ရလို. ဝယ်သင့်ပါတယ်။
ပါဝါက ၅သောင်းကျော်ပါလို. ပမာဏ အများဆုံး ကားထောက်နိုး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်း – 77000 kyats
အမည်: High Power Car Power Bank and Air Compressor